Umdlalo omtsha wePokémon weefowuni uya kukhutshwa ngo-2020 | I-Androidsis
Umdlalo omtsha wePokémon wee-smartphones uza kwi-2020
I-Pokémon GO mhlawumbi ngumdlalo osekwe okanye ophefumlelweyo yi-saga eyaziwayo eyaziwa kakhulu kwi-Android. Ngelixa sinezinto ezilungileyo Ukukhetha imidlalo yePokémon ekhoyo kwi-Android namhlanje. Kodwa sinethemba lokuba isihloko esitsha siza kongezwa kolu khetho kunyaka olandelayo. Ezi zicwangciso sele zibhengeziwe.
Kule meko yiDeKa, Inkampani yaseJapan enoxanduva lokuphuhlisa lo mdlalo mtsha. Ifemi ibisebenzisene neNintendo kwixa elidlulileyo kwimidlalo eyahlukeneyo, enje ngokuwela kwezilwanyana: iPocket Camp, iMiitomo kunye neMiqondiso yoMlilo yamaHere, phakathi kwabanye. Ke yinkampani esele inamava malunga noku.
Ngelishwa, ukuza kuthi ga ngoku akukho datha kule game intsha yePokémon. Kulindeleke ukuba ukwazisa ngokusesikweni ngeyoKwindla 2020. Le kuphela kweenkcukacha ezishiywe yinkampani ekufikeni kwakho. Ngokuqinisekileyo kwezi veki siza kwazi ngakumbi ngayo.
I-Pokémon yisaga yokuthandwa kakhulu namhlanje. Umzekelo olungileyo woku yiPokémon GO, ephakamise izigidi ze- ukuba yenye yezona zidumileyo nango-2018, nangona ibisemarikeni okwethutyana ngoku. Ke sisaga eqhubeka ukuvelisa umdla omkhulu.
UDeNa uchaze ukuba kungekudala baya kutyhila idatha malunga nomdlalo. Akukhange kuchazwe ukuba nini, ke kule ngqondo kuya kufuneka silinde ezinye iiveki ezimbalwa. Ukulindelwa kuphezulu, kuba ngeli xesha ayisiyiNintendo okanye iNiantic enye yabo banoxanduva.
Okwangoku, asijonganga phambili kulo mdlalo mtsha wePokémon. Ukusukela kungekudala I-Super Mario Kart ye-Android iya kuba yinyani. Umdlalo sOkwangoku ikwi-beta evaliweyo, kulinganiselwe eUnited States naseJapan. Ukuphehlelelwa kwayo kulindeleke ukuba kwenzeke ehlotyeni. Olunye uqaliso lomdla kubasebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Umdlalo omtsha wePokémon wee-smartphones uza kwi-2020
I-Honor V20 ifumana iKhomputha yokuDibanisa kunye noMlingo oMtsha we-UI 2.1